यी ६ नायिका, जसका लागि लामो उचाई बन्यो बोझ | NepalDut
यी ६ नायिका, जसका लागि लामो उचाई बन्यो बोझ
मोडलिङ तथा एक्टिङको लागि रुप रंग संगै शारिरिक उचाई पनि उत्तिकै महत्वपुर्ण छ । हलिउडमा मात्र होइन बलिउडमा पनि लामो उचाई भएका नायिका प्रशस्तै छन् । जसमा अनुष्का शर्मा, दिपिका पादुकोण, सोनम कपुर, क्याट्रिना क्याफ लगायतका चर्चित हिरोइनहरु छन् ।
तर यस सन्दर्भमा १९९० देखि २००० को दशकमा धेरै लामो उचाई खासै चल्न सकेन । किनकी हिरोइनको अगाडि हिरो नै होचा देखिन्थे । र लामो उचाई भएकै कारण तिनै हिरोइनले कतिपय चर्चित फिल्म तथा हिरोसंग खेल्ने पाउदैनथे । त्यहि उचाई पछि गएर आफ्नै लागी बोझ बन्न पुग्यो ।
१.पुजा बन्ना -५ फिट ९ इन्चकी पुजा फिल्म विरासतबाट चर्चामा आएकी हुन् । एकपटक उनले भनेकी थिइन् कि लामो उचाइ भएकै कारण कुनैपनि हिरो संगै काम गर्न तयार हुँदैनन् । लामो उचाई भएकै कारण उनले सजिलै फिल्ममा प्रवेश हुन पाउन्नथिन् ।
४. सोनाली -विहेपछि फिल्म क्षेत्रबाट पछि हटेकी नायिका सोनालीको उचाई ५ फिट ८ इन्च रहेको छ । उनले आफ्नो लामो उचाई र पातलो कम्मर भएकै कारण फिल्म अफर आउँदैनथ्यो । सोनालीले कैयौ फिल्म खेलेपनि खासै चर्चामा भने आउन सकिनन् । हाल उनी कुनै टेलीभिजन शो मा जजको भुमिकामा देखा पर्दछिन् ।
५. युक्ता मुखि-साउथ फिल्म उद्योगकी यि हिरोइनले जम्मा ६ फिल्ममा काम गरेकी छिन् । लामो उचाई भएकै कारण उनले मिस वल्र्डमा नाम लेखाइन् तर फिल्म भने फ्लप भए । यिनको उचाई ६ फिट १ इन्च रहेको छ ।
६. दिपानिता शर्मा -मोडलबाट नायिका बनेकी दिपानिताले ८ वटा काम गरिसकेकी छिन् । लामो उचाइ भएक्रै कारण उनको जोडि कुनैपनि हिरोसंग मिलेन र मुख्य भुमिका खेल्नबाट बन्चित समेत हुनु पर्यो